Goorma ayaa xilka laga qaadayaa tababaraha kooxda Chelsea Maurizio Sarri? – Gool FM
(London) 26 Feb 2019. Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa tilmaamaya in kooxda Kubadda cagta Chelsea ay xilka tababarenimo ka qaadi doonto Macallin Maurizio Sarri isbuucan.
Chelsea ayaa ciyaar xiiso badan oo ahayd kama dambeystii EFL waxa ay Axaddii 0-0 wada galeen Manchester City ka hor intii aysan gool ku laad (penalty shootout) Koobkii ku qaadin Man City.
Ciyaartaasi waxaa jawigeedii beddelay markii goolhaye Kepa Arrizabalaga uu diiday in uu garoonka ka soo baxo markii tababaraha Chelsea uu damcay in uu ku beddelo Willy Caballero oo ku fiicnaa dhanka Rigoorooyinka.
Wargeyska ‘The Telegraph’ ayaa maanta qoray in maamulka Chelsea ay ku farxeen natiijadii ciyaartaasi ay Man City isku mari waayeen gool la’aanta hase yeeshee ay u arkaan Sarri in uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya ciyaartoyda iyo taageerayaasha Chelsea.
Haddaba toddobaadkan ayaa warku intaa ku darayaa in Chelsea ay xilka ka tuuri doonto Sarri, isla markaana tababare kumeel gaar ah u magacaabi doonto caawiyihiisa Steve Holland.
Dhanka kale Chelsea ayaa ku ganaaxday goolhaye Arrizabalaga inuusan wax mushaar ah ka qaadan doonin naadiga muddo isbuuc ah.